यस्ता छन् आफ्नो जन्मदिनमा धुर्मुसका तीन संकल्प – www.agnijwala.com
यस्ता छन् आफ्नो जन्मदिनमा धुर्मुसका तीन संकल्प
पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ताको परिचय बनाएका चर्चित हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’को आज जन्मदिन परेको छ। जन्मदिनका अवसरमा उनले केही न केही नयाँ कुरा घोषणा गर्ने गर्छन्।
वि. सं २०४० मा बुवा बोगराज कट्टेल र आमा कमला कट्टेलको जेठो सन्तानका रूपमा सोलुखुम्बुमा जन्मेका सीताराम अर्थात् धुर्मुसले आज बिहिबार आज ३५औं जन्मदिन मनाउँदै छन्।
२०७२ सालको भूकम्पपछि कलाकार सीताराम आफ्नी श्रीमती कुञ्जना घिमिरे समेतलाई साथमा लिएर सामाजिक काममा सक्रिय भइरहेका छन्। धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन नै सञ्चालन गरेर उनी सामाजिक काममा होमिएका हुन्।
धुर्मस-सुन्तली फाउन्डेशनले यसअघि सिन्धुपाल्चोक गिरानचौर, महोत्तरीमा नमुना मुसहर वस्ती र रौतहटको सन्तपुरमा एकीकृत वस्ती निर्माण, वीर अस्पतालको सरसफाइ तथा रंगरोगन गरिसकेको छ।
सामाजिक काममा तल्लिन धुर्मुसले चाँडै सिनेमा पनि निर्माण गर्दै छन्। बुभिएअनुसार आज जन्मदिनको अवसर पारेर उनले उक्त सिनेमाको घोषणा गर्ने संभावना छ।
जन्मदिन मनाइरहेका धुर्मुस उर्फ सीताराम कट्टेलसँग नेपालखबरका प्रभात लामाले गरेको कुराकानीः
आज विशेष दिनमा विशेष योजनाहरू के-के छन् त?
आज मेरो जन्मदिनमा खास त्यस्तो ठूला योजनाहरू केही छैनन्। बिहानै मन्दिर गएँ। बुवाआमासँग आशीर्वाद लिने काम हुँदैछ। परिवारसँगै छु। अलिकति सानो सहयोग गर्ने की भन्ने सोचमा छु। योजनाहरू बन्दै छन्।
तपाईंको जन्मदिनमा केही नयाँ कुरा घोषणा हुन्छन् भनेर धेरैले आशा गर्ने गर्छन्। यसपटक के छ होला?
हरेक वर्ष मेरो जन्मदिनका दिन केही न केही गर्ने घोषणा हुने भएकाले यस्तो अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो। यस वर्ष पनि केही नयाँ कुरा घोषणा वा काम गर्ने योजनाहरू नभएका होइनन्। तर अझै पूरा तयारी नभएकाले सामान्य जन्मदिन मानाउनेबाहेक अरू ‘खतरा’ नै केही हुनेवाला चाहिँ छैन।
कम्तीमा पनि सिनेमा घोषणा हुने हामीले अनुमान गरेका छौं। हाे त?
हामीले पनि यही कुरा सोचेकाचाहिँ थियौँ। तर यसका लागि सबै टिम फिक्स भइसकेको छैनन्। जस्तो डाइरेक्टर को रहने, संगीतकार कसलाई लिनेजस्ता थुप्रै काम बाँकी छन्। यस हिसाबले पनि हतार गरेर फ्याट्ट भनिहाल्ने भन्दा पनि केही दिन गृहकार्य गरेर घोषणा गर्ने योजनामा छौं। आज मेरो जन्मदिनलाई विशुद्ध जन्मदिनकै रूपमा मनाउने भन्ने अहिले सम्मको मेरो मुड हो।
जन्मदिनका दिन तपाईंका मुख्य तीन संकल्प भन्नुपर्दा?
पहिलो कुरो त यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम बनाउने नै हो। यसका लागि भरतपुर महानगरपालिकामा कुरा पनि भइरहेको छ। सरकारले केही दिनका लागि छलफलमा राखेको छ। आशा गरौं, यसको छिट्टै टुंगो लाग्ने छ। यदि भरतपुरमा स्टेडियमका लागि सरकारले जग्गा नदिए अर्को विकल्प खोजेर भए पनि हामी त्यसमा लाग्ने हामी छौं।
दोस्रो कुरा, हामी कलाकार भएकाले यो साल मनोरञ्जन दिनका लागि सिनेमा निर्माण तथा कलाकारिता र हास्यव्यंग्यलाई निरन्तरता दिने योजनामा छौं। सिनेमाको नाम तथा यसबारेको घोषणा केही दिनमै गर्ने छौं।
तेस्रो कुरा, सामाजिक तथा राष्ट्र निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने काम जारी रहने छ। हामीलाई सामाजिक कार्यमा जुट्न हामीलाई तीन करोड नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले निरन्तर हौसला र साथ दिइराख्नुभएको छ। यसैले उच्च मनोबलका साथ राष्ट्र निर्माणमा लागिरहने संकल्प हामीले लिएका छौं।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि जग्गामा विवाद छ, नमुना नेपालको परियोजना छ, फेरि सिनेमा निर्माणमा पनि जुट्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि यो वर्ष अलि चुनौतीको बाटोमा हिड्दै हुनुहुन्छ?
त्यस्तो लागेता पनि हामीसँग हातेमालो गर्ने सहयोगी मन भएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबिहनीहरू हुनुहुन्छ। क्रिकेट स्टेडियम, नमुना नेपालजस्ता कुराहरू निकै ठूला परियोजना भएकाले यसमा राज्यको पनि साथ र सहयोग जरुरी हुन्छ। सबैबाट साथ सहयोग पाउनेमा हामी ढुक्क छौं।
कलाकारिता हाम्रो मूल धर्म नै भएकाले सिनेमा निर्माणले खास ठूलो समस्या पार्छजस्तो मलाई लाग्दैन। यसलाई चुनौती भन्नुभन्दा पनि हामीले केही गर्नै पर्छ है भन्ने खालको हिसाबले लिएका छौं।